Amaski ebusweni: khetha okufanele wena
Namuhla kwi-intanethi ungathola ama-masks amaningi obuso obuhlukile. Zonke zihlukaniswa ngezenzo, izingxenye nezinye izinto. Ngezinye izikhathi, ukuze uthole imaski efanelekile yesikhumba sakho, kufanele uzizame eziningi ze-masochek.
Izakhi ezingcono kakhulu zamaski
Ukuze masokmozhno sebenzisa okuningi imikhiqizo yemvelo: amafutha, imifino, izithelo, kefir, uju nokunye. Ngayinye yalezi zingxenye kumele zikhethwe kusuka kuhlu lesikhumba sakho, kanye nasenkinga onayo.
I-Apple bucks igxuma kahle futhi iduduza isikhumba. Ama-karoti aphatha ama-rashes, futhi yi-antiseptic enhle kakhulu. Imvubelo yeBrewer ibaluleke kakhulu kunesikhumba samafutha. Ijusi le-celery lingasetshenziswa njenge-lotion - liqinisa isikhumba sobuso. Uma udinga ukuhlanzwa okujulile, bese wenza imaski kusuka ku-turnips. Amaqanda ayisisekelo esihle kakhulu semaski. Iqanda le-egg londla kahle isikhumba esomile, futhi amaprotheni ayomisa isikhumba esinamafutha futhi unomphumela wokubamba.
Ikhukhamba Mask idonsa, ivuselele futhi iguqule isikhumba. Kuyinto enhle kakhulu ngesikhathi sehlobo, njengoba ihlanza isikhumba futhi iqede ukujula. Umphumela ofanayo namazambane aluhlaza. Ilayisi inomphumela wokuhlanza nokunciphisa. Kufanelekile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba. Iphilisa amanxeba, idonsa futhi ifinyelela isikhumba, igcwalise ngamavithamini nezinto eziwusizo. Ukuhlanza ngokuphelele, kuhlanza futhi kuvuselele isikhumba se-facial pure kusuka ku-apricot, i-avocado, i-banana, isitshalobhisi. Ukunciphisa i-Ananas kunomphumela we-astringent. I-mask of utamatisi ifanele isikhumba samafutha.
Itiye le-lemon, lihlanjululwa ngamanzi, likhanyisa isikhumba kancane futhi lisize ukuqeda izindawo ze-pigment. Ijusi lama-parsley noma amaqabunga e-lettuce athambisa, aphulukise futhi anesthetizes. Ijusi le-Orange linciphisa kahle isikhumba. Ijubane le-Watermelon londla ngokujulile, linciphisa igama, lixhumisa izinhlayiya zesikhumba ezinomzimba. I-yogurt yemvelo izosiza ukubuyisela ibhalansi ye-acid-base.
Ukubopha izingxenye zamaski: ubumba oluyimpuphu, amancane ama-oat flakes, ama-alimondi aqoshiwe, ufulawa wekolweni, ubisi powder nokunye okunjalo.
Ngokuvamile ama-cosmetologists ancoma ukuthi afake amafutha abalulekile kumaski. Zihle kakhulu ngezinkinga eziningi zesikhumba. Ukuze ujwayele ukuma isikhumba, kungcono ukusebenzisa i-sandalwood, i-lavender noma i-oil primrose. Ngesikhumba samafutha, i-ylang-ylang, i-lemon ne-geranium amafutha kufanelekile. Ngo-acne, ama-cosmetologists ancoma amafutha omuthi wetiye, izaqathe kanye nobusuku be-primrose. Uma isikhumba sinezikhala zendawo, sebenzisa i-sage, i-lavender noma i-oile yamafutha. Nge-eczema kusiza amafutha we-lavender, i-camomile ne-icicles.
Ngezinye izikhathi for masks, ingxenye eyodwa kuphela ngokwanele. Isibonelo, amaqanda, imifino efihliwe noma izithelo, ubumba nokunye okunjalo. Noma kunjalo, kaningi kunalokho, izingxenye eziningana zisetshenziselwa ubuso olulodwa kumaski owodwa. Isibonelo, ubumba, uju, ubisi namafutha abalulekile.
Amaphikishi for masks ebuso ubuso
Ukuze ulungiselele i-mascot enjalo, uzodinga lezi zithako ezilandelayo: isipuni esisodwa samafutha omnqumo, isipuni esisodwa semifino esomile se-chamomile, isipuni esisodwa soju, ufulawa oluncane, i-yolk eyodwa, ingilazi eyodwa yewayini elimhlophe elimhlophe.
Thelela iwayini libe yiwayini lamasonto amabili bese uliphikelela ekamelweni lokushisa. Lapho umntwana egqoke, hlanza uju, i-yolk, amafutha omnqumo kanye nofulawa nekomishi engxenyeni ye-infommile ukumnika. Hlanganisa konke ngokuvumelana nokukhilimu omuncu. Ingxube kufanele isetshenziswe ebusweni ngobuningi obude emaminithini angu-15-20, bese ugeza emanzini afudumele. Ngemuva kwalokho, sula isikhumba nge-loom chamile bese usondeza ngesikhilimu esiphuthumayo.
I-Romantic Mint Mask
Ukuze wenze imaski enjalo, thatha isipuni esisodwa samaqabunga e-mint oqoshiwe, amaprotheni owodwa, isipuni esisodwa soju, isipuni esisodwa sama-inflorescence omisiwe. Zonke izithako ziqoshiwe, bese ufaka amanzi amancane afudumele. I-Maskananesite ku-decollete nakubuso emaminithini angu-20-30. Hlanza imaski ngamanzi apholile bese usula isikhumba nge-lotion. Amaski ane-chamomile ahlaziye ngokuphelele isikhumba, asondle futhi asilula.
Ubuso bombuso nge rose
Maskagotovitsya elula kakhulu. Thatha izipuni ezine zamanzi ahlanzekile uphinde uthule izimpondo eziyishumi. Amanzi anamafutha kufanele afakwe emahoreni amathathu noma amane. Emva kwalokho, izipuni ezintathu zoju kufanele zengezwe kuwo. Ngaphambi kokusebenzisa i-mask, ubuso kufanele bufakwe emanzini okulungiselelwe ngokukhethekile. Thatha amacembe nge rose elimnandi, bese uthela izinkomishi ezimbili zamanzi abilayo. Udinga ukuhlala esitini se-steam okungenani imizuzu eyishumi nanhlanu. Ngemuva kwalokhu, sebenzisa ungqimba obunzima bemaski bese ushiya imizuzu engamashumi amabili. Sula umaski ngamanzi apholile.
Mask of izimpungushe nge orange
I-acne ivame ukubangelwa ukungcola kesikhumba. Ngakho-ke, ku-nihizbavitsya, udinga ukuhlanza ngokuphelele isikhumba. Njengengxenye yale maski, kune-soda ehlanza ngokujulile isikhumba, i-oatmeal idlulisa izinhlayiya ezikhanyisiwe zesikhumba, i-orange iqeda amabhaktheriya futhi inciphisa ukuvuvukala.
Ukwenza imaski uzodinga izithako ezinjalo: ithisipuni eyodwa ye-soda, isipuni esisodwa se-oatmeal kanye namathisipuni amabili ekhekhe eliluhlaza. Hlanganisa zonke izithako ngokugcwele bese wengeza amanzi amancane ahlanzekile kumaski ukuze uthole ukuvumelana okunamathisela okunamandla. Ngemuva kwalokhu, sebenzisa imaski ekuhambeni okuyisimungeza ebusweni obuhlanzekile bese uyishiya imizuzu eyishumi nanhlanu. Smitemasku amanzi amnandi. Uma isikhumba sivinjiswe kancane emva kwe-mask, bese u-oyela ngamafutha omnqumo. Amafutha omnqumo anganezelwa kumaski ngokwawo.
Mask for isikhumba samafutha ebusweni nge orange
Njengoba kushiwo ngenhla, ikhasi le-orange emasikini lihlanza ama-pores futhi liqede amabhaktheriya. Amafutha kakhukhunathi emasikini nawo ahlanza ama-pores, enza ama-igluboko athulukise isikhumba. Ubisi bucebile kumaminerali namavithamini, okondla isikhumba.
Thatha amathisipuni amabili ebisi, amathisipuni amabili ohlobo lwe-orange kanye ne-isipuni esisodwa samafutha kakhukhunathi. Hlanganisa zonke izithako kuze kube yilapho ubushelelezi nokuvumelana, bese ufaka imaski ebusweni imizuzu eyishumi nanhlanu. Smoothmask ngaphansi kwamanzi afudumele.
Kule maski, ubisi lungasetshenziswa ngamaphesenti amafutha ahlukene (khombisa isikhumba sakho). Ukuze uphuze amafutha kakhukhunathi, uwubeke esitsheni samanzi ashisayo. Ngaphambi kokusebenzisa imaski kunconywa ukuba kuqhume ubuso ukuze izimbungulu zivuleke futhi izithako zokugqoka zingcono zingene esikhumbeni.
I-Mask Face Face Mask
Ngokuvamile futhi i-cosmetologists nobuhle be-salon banikeza amaklayenti izinqubo ezihlukahlukene "ze-chocolate": amaski, ama-wrappings nokunye okunjalo. Zisiza kakhulu esikhumbeni. Kodwa kungani uya salon, uma imaski enjalo ingenziwa kalula ekhaya. Kuthatha isikhathi esincane futhi akudingeki uchithe okuningi. Noma kunjalo, ungakhohlwa ukuthi ushokoledi yi-allergen. Ngakho qiniseka ukuthi kusengaphambili ukuthi awunayo i-allergies kuwo.
Ukuze wenze imaski, uzodinga ushokoledi, oqukethe i-cocoa engaphansi kuka-75%. Ngaphezu kwalokho, ushokoledi kufanele ube njengemvelo ngangokunokwenzeka, izithasiselo ezingenandaba. Futhi emasikini udinga ama-almond kanye namafutha omnqumo, amanzi amaminerali. I-mask ilungiselelwe ngale ndlela. Phula imigoqo ye-tshokolethi 8 yephakethi ukucola ushokoledi emanzini okugezela noma ku-microwave. Nge-chocolate, engeza isipuni samafutha e-almond noma amafutha almond amnandi. Uma ukuvumelana kukhulu kakhulu, engeza amanzi amancane. Ngaphambi kokufaka isicelo, faka isikhumba. Khona-ke ngobuningi obunzima, sebenzisa imaski efudumele ebusweni bakho bese uyishiya imizuzu eyishumi nanhlanu kuya kwamashumi amabili. I-mask kufanele isomile futhi iqhume. Geza mask kuqala ngamanzi afudumele bese upholile.
I-Takamask ifanele zonke izinhlobo zesikhumba. Yenza isikhumba sobuso sishintshe, sibe mnene, sikhanyise. Futhi, i-mask igxilisa imibimbi emihle. Ukufeza imiphumela emihle, kunconywa ukwenza lokhu kanye ngesonto.
Indlela yokunakekela kahle izindebe?
Ukulwa nama-freckles: ukushisa ilanga ngokufanele
Indlela yokuqeda ngokushesha induna
Ukunakekelwa kwekhanda ngemuva kwezinsuku ezingu-30, izikhambi zabantu
Indlela yokukhipha u-acne endleleni yezindlela zobuso
Amahlumela aseBrussels ahlanziwe omisiwe
I-apple pie yesiNgisi
Ungakhetha kanjani ubuso obulungile?
Izinhlobonhlobo zemikhawulo yasebusika: amasaladi ngenkathi
Ukulungiswa kwamanani okungewona ukuhlinzwa
Isinkwa isinkwa ku-aerogril
Ukupheka kwe-porak steak - okulinganayo kweRussia ye-American steak steak
Amazambane abhakabhaka ngamakhowe.
Konke okwesifazane: ubuhle, impilo
Ungadla kanjani kahle uma une-cholesterol ephezulu?
U-Dima Bilan wembula isamba senombolo ye "Eurovision"
Imibono yokuthuthukisa isakhiwo sakho segadi
Ukuhlaselwa kobukhosi: inkosikazi kaCharles uCharles iyangabaza ukuthi uHarry indodana yakhe
Ingabe kufanelekile ukuqala ubuhlobo obusha nomyeni wangaphambili?